ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်း လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် ယောဂပုံစံများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားက်န္းမာေရး » ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း » ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်း လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် ယောဂပုံစံများ
ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်းမှာ ယောဂလေ့ကျင့်ဖို့ စိုးရိမ်နေပါသလား။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ယောဂဆိုတာ လူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ အံ့သြစရာလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေတောင် လေ့ကျင့်နိုငပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ယောဂကို သင့်ရဲ့ရာသီချိန်မှာလေ့ကျင့်တာက ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကိုတော့ လျော့ကျစေပါသေးတယ်။
ရာသီလာနေစဉ်မှာ ခန္ဓါကိုယ်က ဟော်မုန်းတွေအပြည့် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ကြည့်တဲ့ သင့်ရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ ကိစ္စသေးသေးလေးကစ ဒေါသထွက်နေတာမျို၊ ခံစားချက်တွေပြင်းထန်နေတာမျိုးတွေနဲ့ နာကျင်မှုတွေကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ စိတ်နဲ့ခန္ဓါကိုယ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ယောဂဟာ သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ပုံစံကို တုံ့ပြန်မှုတွေပိုကောင်းအောင်၊ ကြံ့ခိုင်မှုပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယောဂဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်တာမျိုး၊ မလုံမခြုံခံစားနေရမှုကို လျော့နည်းစေတာမျိုး (ဒါကတော့ ရာသီလာချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ) အမျိုးသမီးတွေ သူတို့ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ ပိုပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ယောဂလေ့ကျင့်နေစဉ်မှာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်အောက်ပိုင်းကလည်း ပိုပြီးကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းလာပါတယ်။
ဒါဟာ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ရာသီလာတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကို လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ adrenaline ထုတ်လွှတ်မှုများလာတာကလည်း နာကျင်မှုတွေလျော့နည်းစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
ရာသီလာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သင့်လျော်မယ့် ယောဂပုံစံတွေကတော့။
၁။ Head of the Knee pose
ပထမဆုံး ဖျာပေါ်မှာ တင်ပလ္လင်ခွေအနေအထားကနေပြီး ခြေတစ်ဘက်ကို အပြင်ကို ဆန့်ထုတ်ထားပါ။ အသက်ရှူတာကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်တစ်ဘက်ကို ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ဆီကို ဆန့်ထုတ်ပါ။ လက်နဲ့ခြေချောင်းလေးတွေထိသည်ထိ ဆန့်ထုတ်ပါ။ (တကယ်လို့များ အဲ့လောက်ထိမပျော့ပျောင်းဘူးဆိုရင် ရနိုင်သလောက်ဆန့်ပါ)။ ဒီအနေအထားကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့အတွက် ခေါက်ထားတဲ့ စောင်နှစ်ထည်လောက်ကို တင်ပါးအောက်မှာ ခုထားပါ။
ဒီအနေအထားဟာ ဗိုက်က ကြွက်သားတွေကို တင်းမာစေပြီး ပုခုံးကိုလည်း ဆွဲဆန့်သလိုဖြစ်စေတာကြောင့် ရာသီလာစဉ် ခါးနာတာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အသေးစိတ်ကစ သေချာဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ပထမဆုံး ဒူးတုပ်လိုက်ပြီး ခြေချောင်းလေးတွေအချင်းချင်းထိလို့ ဖနောင့်တွေကတော့ ခြားနေပါစေ။ ခြေဖနောင့်နှစ်ခုကြားက နေရာလွတ်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ တင်ပါးကို ဖနောင့်နှစ်ခုကြားက နေရာမှာ ထားပြီးထိုင်ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခြေထောက်ကိုမရွေ့အောင်ထားပြီး ကိုယ်ကို ကွေးချလို့ နဖူးနဲ့ ကြမ်းပြင်ထိနေပါစေ။
လက်တွေကို သင့်ဘေးနားပဲ ကပ်ထားလို့လည်းရသလို အရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်ထားလို့လည်းရပါတယ် (ဆုတောင်းသလိုပါပဲ)။ ပုခုံးကြွက်သားတွေကို ပိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး လက်မတွေကိုတော့ သင့်နောက်မှာ ပူးထားလိုက်ပါ။
၃။ Forward bend pose
ဒီမှာတော့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို ပိုပြီးကွေးညွတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မတ်တပ်ရပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ခြေမကို လက်တွေနဲ့ ထိနိုင်သည်အထိ ခါးကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကွေးချလိုက်ပါ။ သန္ဓေသားတွေရဲ့အနေအထားအတိုင်း ဗိုက်က ကွေးကျသွားတာကို သတိပြုပါ။ ဒါဟာ ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲတာတွေကို သက်သာစေနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီအနေအထားမှာတော့ အရေးကြီးတာက အသက်ရှူတာကို ပုံမှန်လုပ်ဖို့နဲ့ မူးဝေခြင်းရှိမရှိသတိပြုဖို့ပါ။ သွေးတွေက ခေါင်းပေါ်အရှိန်နဲ့စီးသွားတာကြောင့် မူးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအနေအထားကနေ အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဖြေလျော့နိုင်ဖို့ အသက်ကို ရှူထုတ်ပြီး ပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ကို ခါးကနေ ပြန်မတင်ပါ။ လက်နှစ်ဘက်လုံးကလည်း ပြန်လိုက်လာပြီး ကိုယ်ဘေးမှာကပ်လို့ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားကို ပြန်ယူပါ။
သင်လေ့ကျင့်လို့ရမယ့် အချို့သော ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ Swaying palm tree pose, waist rotating pose (ခါးလှည့်) နဲ့ Corpse pose တို့ပါပဲ။
ယောဂဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေအများကြီး ယူလာပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်းကျိုးတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ယောဂကို ပိုပြီးနားလည်ထားဖို့နဲ့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အခြေအနေတွေ ဥပမာ ရာသီလာတာမျိုးတွေကို ပိုပြီးနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Asana during Menstruation. https://iynaus.org/research/asana-during-menstruation. Accessed August 14, 2016.
What Yoga Postures Should Be Avoided During Menstruation?. https://www.ananda.org/ask/what-yoga-postures-should-be-avoided-during-menstruation/. Accessed August 14, 2016.
Yoga During Menstruation. http://www.yogapoint.com/yoga-poses/yoga-for-menstruation.htm. Accessed August 14, 2016.
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားက်န္းမာေရး, ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း
နေ့သစ်တစ်နေ့ကို စတင်နိုင်မယ့် ယောဂပုံစံများ
ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ကျန်းမာရေး
မျိုးအောင်ခြင်းကို အထောက်အကူပြု အားပေးတဲ့ ယောဂပုံစံများ